Carnivals Mabhuku manomwe pakati pezvipfeko, mapato, rudo uye mhosva | Zvazvino Zvinyorwa
Carnivals Mabhuku manomwe pakati pezvipfeko, mapato, rudo uye mhosva
Carnivals. Zvipfeko, masiki, macomparsas, mapato, hunhu, hunonakidza ... Chinja ganda rako uye kurasikirwa nemusoro wako kwemazuva mashoma Uye pakati pemapato uye murga iwe unogona zvakare kuverenga, ndinodaro. Hezvo iwe enda 7 zvinyorwa zvekunyora. Analysis, akasiyana rudo, kuseka uye mhosva. Chero chipi zvacho chinoenda kuCarnival.
1 Carnival - Julio Caro Baroja
2 Carnival - Julia Ortega
3 Plinio (Nhoroondo dzekutanga) - Francisco García Pavón
4 Pakati pousiku Carnival - Shirlee Busbee
5 Ini ndakadanana newe nekuda kwemafaro - Fernando Macías
6 Harbinger weCarnival - Liliana Bodoc
7 Ishe weCarnival - Craig Russell
Carnival - Julio Caro Baroja
Mubhuku rino, Caro Baroja inogadzira ingangoita a chiremba chiremba, iyo inounganidza akawanda magwaro pamutambo uyu, kwete chete munzvimbo dzakasiyana muSpain, asiwo munguva dzekare. Chikamu chakakosha chebasa iri classical kudzidza paCarnival chaiyo mairi yainoongorora yayo hukama nemachechi ekare echihedheni. Asi inosimbisa zvakanaka zvazvinayo nekusimwa kwechiKristu uye mwaka weLent.
karnevaali - Julia Ortega
Un rudo katatu haigone kupotsa mazuva ano. Izvi ndizvo zvinokurudzirwa nemunyori Julia Ortega mune ino nyaya, iyo inotanga rimwe zuva muna 1977, apo muNavarra uye yakaturika pamuti muti chitunha chemusikana mudiki uyo azviuraya. Makore makumi maviri gare gare Izaskun naRaúl, vechidiki vaviri vakakurira pamwe mutaundi rimwe chete tisingazive kuti ihama vanoparadzana kamwe kamwe.
Raúl anoenda kuBarcelona uye anotanga hupenyu hutsva naInés naJuanjo, mapatya maviri akasununguka anozoisa bvunzo dzake. Kumabiko emitambo Raúl sangana nevakadzi vaviri vakanaka, Irene naAzucena, uye kukwezva hakudzivisiki.
Plinio (Mavambo ekutanga) - Francisco García Pavón
Plinio, mukuru asingakundikani weTomelloso Municipal Guard, harimbokundikani, kana kuCarnival kana chero nguva yegore. Aya manhamba ekutanga akaiswa panguva yehudzvanyiriri hwe Muzukuru weRivera Izvo zvine mazita matatu: Idzo mota dzisina vanhu, apo isu tine mhondi yakawanda iyo inouraya avo vakaurayiwa nebanga rine hutsinye. Carnival, iyo inobata nekuponda kusingazivikanwe uko kune kuseri kwechirongwa uko chishuwo nerudo rudo zvakasangana. Y Dziva reropa, uko kune mhosva inotanga pasina mutumbi wemhosva ukaonekwa, uye mhinduro yayo ichavanzwa padhuze neAndrés el Ciego brothel.
Pakati peusiku Carnival - Shirlee Busbee
Uye sei kusaverenga rudo rwekushandisa… Yakagadzwa muna 1812, muLouisana, tine izvi nyaya yerudo ine dutu kesken Melissa seymour, musikana anodada uye akazvimirira, uye Dominic slade, murume anokwezva zvisina tariro. Kubva pavakasangana, duel yemashoko yakatevera pakati pavo. Vaviri vanoramba manzwiro avo nekuyambuka zvine njodzi kwemazwi. Asi ipapo iyo hondo pakati peUnited States neGreat Britain uye vakamukomberedza hunyengeri hwezvematongerwo enyika nekutengesa. Uye mune ino mamiriro ezvinhu iyo zvido zvisina kugadzikana dzinoputikawo.
Ini ndakadanana newe nekuda kwemafaro - Fernando Macías
Iine chirevo chakabudirira chakadai senge yake yekutanga, Mhondi yekufananidza, munyori uyu Cadiz Carnival iri muropa rake. Munyaya iyi pane musikana akarwadziwa, UN famba uye a mukomana anokwanisa kupodza maronda nezwi rake. Uye vaviri vari muCádiz. Asi izvo zvinoratidzika kunge zvinoda kupatsanura, mimhanzi ichaedza kubatanidza.
Hapana zvirinani kukudza izvi Argentine munyori uye mudetembi, akafa kamwe kamwe mazuva mashoma apfuura, pane kuverenga rimwe remabhuku ake. Semuenzaniso, izvi Carnival omen, una inosuruvarisa nganonyorwa izvo zvinoratidzira pamusoro penhamo dzekuvapo kwevanhu. Set panguva yemitambo munzvimbo yeSan Pedro, inotaura nyaya ye Sabino colque, murume wechidiki akaberekerwa muBolivia, anotamira kuBuenos Aires, kunatsiridza hupenyu hwake. Imwe yevatambi ndeye Angela, musikana anorwara neanorexia uye anoshungurudzwa nemukomana wake Renzo. Sabino naÁngela vachasangana kune imwe nzvimbo yakatarwa kare
Iye ishe wecarnival - Craig Russell
Zvakakosha famba famba uchitenderera Cologne Carnival mubhuku rechina iri munhevedzano ye Inspector Fabelrakanyorwa naCraig Russell. Kune vakawanda ndiyo yakanakisa yesaga uye pasina kupokana inonakidza kwazvo. Iyo chaiyo chaiyo hafu-wechiGerman hafu-weScotland komisheni uye timu yake ichafanirwa kutsvaga iyo Ishe weCarnival, UN anouraya serial serial mhondi kuti mukati memakore matatu apfuura akauraya vanhu vake panguva yemitambo yakakurumbira.
Kune rumwe rutivi, Mary Klee, Mubatsiri waFabel, anotambura nekuzvidya mwoyo nekuda kwake zvinoshungurudza zvakaitika kare uye ari pazororo risingaperi. Asi, asingazive kune chero munhu, anosarudzawo kuenda kuCologne kunovhima mhondi inotyisa kupfuura yapfuura. Mumwe waune maakaundi akasarudzika.
Pakupedzisira, hunhu hwechitatu, Taras Buslenko —Special Forces Commander - arimudhorobha achisarudza nhengo dzechikwata chake kuti vabate muchivande. Anoda kugumisa hupenyu hwematsotsi ane hutsinye hutsinye, mumwe munhu akatapwa kuGerman. Mirairo yake hairegi chero chinhu kana chero munhu apinde munzira yekutumwa kwake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Carnivals Mabhuku manomwe pakati pezvipfeko, mapato, rudo uye mhosva
Alberto Conejero anonyora kupera kwebasa raLorca risina kupera